एनआरएनए युकेको भाषा साहित्य विभागको आयोजनामा युवाकवि एवं प्रसिद्ध गजलकार मोतीराम भट्टको संस्मरण गर्दै पहिलोपल्ट भव्य रूपमा गजल सांझको आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रम संयोजक कृष्ण भट्टले बताए ।
सेप्टेम्बर ९ आइतबारका दिन लण्डनको साउथ ह्यारोस्थित ’ह्यारो बरो फुटबल क्लब’ मा आयोजना हुने कार्यक्रममा गजलवाचनका निम्ति नेपालबाट प्रसिद्ध गजलकार रवि प्राञ्जल र करुण थापा बेलायत आउन लागेको आयोजक समिति सदस्य लक्ष्मी राई ’लारा’ ले जानकारी गराइन् । प्राञ्जल र थापाले कार्यक्रममा १० १० वटा गजल वाचन गर्नेछन् । “नखुलेको आकाश खुलेर आयो“ भन्ने रवि प्राञ्जलको प्रसिद्ध गजल पनि उक्त कार्यक्रममा वाचन हुनेछ ।
कार्यक्रमको विशेष आकर्षणका रूपमा गायक राज सिग्देललाई प्रस्तुत गर्न लागिएको संयोजक नारायण गाउंलेले बताए । सिग्देलले ’ऊ जितेर गई या हारेर गई..’ लगायतका आफ्ना लोकप्रिय गजल गाउने छन् ।
कार्यक्रमको विशेष आकर्षणका रूपमा गायक राज सिग्देललाई प्रस्तुत गरिदैछ ।
कार्यक्रममा डा. रूपक श्रेष्ठ, नारायण गाउंले, नृपेश उप्रेती लगायतका केही स्थानीय गजलकारले पनि गजल वाचन गर्नेछन् । प्रसिद्ध गायिका शर्मिला बर्देवा र गायक प्रमोदराज न्यौपानेले गजल गायन समेत प्रस्तुत गर्नेछन् ।
दिउंसो ४ बजेबाट सुरु हुने उक्त गजल सांझको प्रमुख आतिथ्य बेलायतका निम्ति नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु क्षेत्री) को रहनेछ भने समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको श्रोताका रूपमा उपस्थिति रहने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि शिक्षाकर्मी एवं समाजसेवी कृष्ण भट्टको संयोजकत्वमा नारायण गाउंले, नृपेश उप्रेती, लक्ष्मी ’लारा’ राई र कृष्ण तिवारी सम्मिलित एउटा आयोजक समिति गठन गरिएको थियो ।